Muhiim ma tahay in Somaliya u dabaaldegto xornimo xilli gumeysi cusub ku jirto - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ka mida Koofurta iyo Bariga Somaliya waxay ku hoos noolyihiin cadow iyo gumeysi cusub oo ka xun waxa lagu tilmaami jirey gumeysigii cadaa ee wasakhda ahaa.
Gumeysigii Ingiriiska iyo Talyaaniga waxyaabo badan ayaa laga dhaxley sida waxbarashadii manhajka gaalada ee Camuud oo ay ka soo baxeen dhalinyaro badan oo markii dambe intooda badan madaxdii dalka soo noqdeen aan ka ahayn Siyaad Barre oo ahaa tiibo Talyaani.
Waxa sidoo kale jirtay in lagu faano Camuud oo qofkii ka soo baxa loo haysan jirey inuu ahaa qof waxbartey. Talyaaniga sidoo kale wuxuu dalka ka dhisay laamiyo ilaa hadda dadku manaafacaadsadaan sida jidka Feerfeer ee ka soo baxa Hiiraan ilaa Itoobiya.
Waxa kale oo jira in Talyaanigu laamiyo iyo dhinaca wax soo saarka horumar ka gaarsiiyay Koofurta dalka intii uu joogey. Dabcan markii lagu kacay wuxuu bilaabay inuu dadka iska horkeeno inkastoo murtida gumeysi diidka badankooda ay ka iman jireen Woqooyiga Somaliya.
Dhinaca Woqooyiga markii Ingiriisku joogey ugaasyadii talin jirey waxay ka saxiixeen in aanu ku dhalin dalka taas oo dhaqan gashay, inkastoo markii dambe uu dhisay meelihii ogolaa isaga sida Hargeysa uuna dhulka la simay Saylac oo gobolkoo dhan laga xukumaayay.
Gumeysi sidaas ahaa oo wax kaga tagey dalka iyo argagixiso burburinaysa wixii aan dhisanay isku meel ma galaan. Ugu yaraan gumeysigii cadaa ma haboon tahay in la siiyo mudnaan saaida aan ka ahayn in la tirtiro wixii uu ka tagey sida la dagaalanka dadka uu ka tagey ee yiraa Ingiriisow noo soo gurmo.
Waana qalad in la siiyo mudnaan aanu lahayn. Dagaalka hadda uu inagula jiraa waa kii maskaxda oo waxaad aragtaa dhalinteenii oo moodey idaacadahooda kuwo ay leeyihiin, taas oo ka dhigan in dhalinteenu si fudud u qaadan karaan fikrado diin ka baxa oo ku hoos jira beenta xor baan nahay.
Anigu ma arko barnaamijyo waaweyn oo dhegaha dhalinyarta dib loogu hanan karo.
Ugu dambeyn waxa mudnaan buuxa leh la dagaalanka argagixisada oo ka dhalatey sanado badan oo burbura in dhalinteena isqarxinta xalaal looga dhigey iyo daadinta dhiiga muslimiinta halka inta harteyna ay wataan fikrado gaaleed oo idaacadaha gaaladu ku abuureen.
Hala weynaayo la dagaalanta cadowga cusub ee argagixisada ee dalku leeyahay maalinta dalka laga tirtirana ha noqoto maalinta xoriyada cusub ee dalku qaatey inta ka horeysa yaan lacag badan lagu qasaarin 1960 ee dadka hala baronwaxa Somalidu ahayd Ingiriis iyo Talyaani kahor.
Haddii aan 1960 ka dhigno wax weyn waxa meesha ka baxaya cadowga cusub iyo taariikhda Somalida.